अनमी उषा केसी भन्छिन् : वडाध्यक्षलाई फोन गर्नाले बाँचेँ – Health Post Nepal
अनमी उषा केसी भन्छिन् : वडाध्यक्षलाई फोन गर्नाले बाँचेँ
२०७५ पुष १६ गते १०:३०
अनमीमाथि कुटपिटपछि बर्थिङ सेन्टर बन्द
अनमीमाथि कुटपिट गर्नेलाई ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ मुद्दा
कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकामा रहेको थुनियाँ स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत अनमी उषा केसीले आफूमाथि आक्रमण भएको दिन घटनाको शंका लाग्नासाथ वडाध्यक्षलाई फोन गरेका कारण आफू बाँच्न सफल भएको बताएकी छिन् ।
‘घटनाको शंकापछि वडाध्यक्षलाई फोन गरिहालेँ । त्यही कारणले नै बाँचेजस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा ढोका ढक–ढक हान्यो, को हो भन्दा केही बोलेन, त्यसपछि मैले वडाध्यक्षलाई फोन गरेँ । फोनमा कुरा हुदाँहुँदै ढोका फोरेर भित्र पस्यो ।’
आक्रमणकारीले ढोका हान्न थाल्नासाथ आफूले अध्यक्षलाई फोन गरेर सहयोग मागेको उनको भनाइ छ ।
घटनास्थल पुगेका हेल्थपोस्टकर्मीसँग उषासहित अन्य सरोकारवालाका भनाइ जस्ताको तस्तै–
उषा केसी, घटनाकी पीडित
अब म मर्ने नै भएँ भन्ने लाग्यो
उषा केसी, अनमी, घटनाकी पीडित
९ गते बेलुका हेल्थपोस्टमा एकजनाको सुत्केरी गराएर घर पठाएपछि बर्थिङ सेन्टरको क्वार्टरमा घटना घटेको थियो । रातिको सवा १० बजिसकेको थियो । म क्वार्टरमा थिएँ, एक्कासि ढोका ढक–ढक हानियो । को हो भन्दा केही नबोलेपछि र पालेको पनि फोन नउठेपछि शंका लाग्यो ।
वडाध्यक्षलाई फोन गरेँ । वडाध्यक्षसँग कुरा गर्दागर्दै अग्लो मान्छे भित्र पसेर कुटपिट गर्न थाल्यो । छेउमै रहेकी स्विपर दिदी पनि डरले भागिसक्नुभएको रहेछ ।
उसले पिट्दापिट्दै अँध्यारो रातमा बल्लबल्ल बाहिर निस्किएँ । उसले आफ्नो शरीरमा लुकाएर लठ्ठी ल्याएको रहेछ । त्यही लठ्ठीले मलाई हान्यो । टाउको शरीर सबैतिर हान्दै थियो ।
मैले आफूलाई बचाउन धेरै प्रयास गरेँ । हातले टाउको जोगाउँछु भन्दा मेरो हातमा उसले हानेको लठ्ठी लागेर देब्रे हात भाँचियो । अब म मर्ने नै भएँ, मार्नेको मुख देखेरै मर्छु भन्ने हिम्मत जुटाएर उसको ज्याकेटमा समातेर बल्लबल्ल उसले लगाएको माक्स खोल्न सकेँ । अनुहार हेर्दा २ गते हेल्थपोस्टमा आएकै मान्छे पो रहेछ । त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट भागिहाल्यो । ऊ भाग्नु र वडाध्यक्ष आइपुग्नु एकैसाथ भयो ।
फोन आएपछि सुतेकै कपडामा दुगुरेँ
रामेश्वर वर्मा, ११ नं. वडाध्यक्ष, शिवराज नगरपालिका, कपिलवस्तु
राति घरमा सुतिरहेको थिएँ, अचानक नचिनेको नम्बरबाट फोन आयो । उठेर फोन उठाएँ । उताबाट भन्न सुरु भयो, कोही आएको छ, ढोका ढकढक्याएको छ । छिटो आउनुस् । यसरी भनिरहँदा म कसले के भनिरहेछ, कहाँ के भयो अलमलमा परेँ । फेरि उताबाट आवाज आयो– म सिस्टर हो ।
सिस्टर भनेपछि मैले अन्दाज लगाइहालेँ, स्वास्थ्यचौकीको बर्थिङ सेन्टरमा केही भयो । म आत्तिएँ भाइ र चार छोरालाई उठाएँ । सुतेकै कपडामा हामी सबै स्वास्थ्यचौकीतिर दुगुर्यौँ । त्यहाँ पुग्दा ऊ कुटपिट गरी भागिसकेको रहेछ । मेरो घर र स्वास्थ्यचौकी ६–७ सय मिटरको दूरीमा छ ।
हेम केसी अनमी उषा केसीका बाबु
दोषीलाई कारबाही होस्
हेम केसी, अनमी उषा केसीका बाबु
धन्न छोरीले वडाध्यक्षलाई समयमै फोन गर्नाले ज्यान जोगिने परिस्थिति बन्यो । वडाध्यक्षले छोरीलाई पुनर्जन्म दिनुभयो । केसीले भने वडाध्यक्ष नभएको भए र नआएको भए पापीले छोरीको ज्यान लिने रहेछ ।
छोरीलाई कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही नभएसम्म छोरीले न्याय पाएको अनुभूति कसरी हुन्छ र ? कुटपिट गर्ने व्यक्ति कुनै पनि हालतमा छुट्नुहुन्न ।
दोषीले छुटकार पायो भने फेरि पनि यस्ता घटना दोहोरिन्छन् । गाउँमा मेरी छोरी मात्रै होइन, कसैको पनि सेवा गर्ने मनोबल रहन्न ।
बर्थिङ सेन्टरहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ, ताकि भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नपाऊन् ।
Tags: उषा केसी, थुनियाँ स्वास्थ्यचौकी